Xildhibaan Aadan Bare oo Dalbaday in Ciidamada Kenya La Geeyo Xuduuda Badda ee Kenya iyo Somaliya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xildhibaan Aadan Bare oo Dalbaday in Ciidamada Kenya La Geeyo Xuduuda Badda ee Kenya iyo Somaliya
Xildhibaan Aadan Bare oo Dalbaday in Ciidamada Kenya La Geeyo Xuduuda Badda ee Kenya iyo Somaliya
Xildhibaan Aadan Bare Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyada barlamaanka ayaa gudbiyay mooshin ku saabsan habka ay tahay in xukuumadda Madaxweyne Uhuru Kenyata u xaliso xiisada muranka xuduuda Badda ee kala dhexeeya Soomaaliya.
Mooshinka uu gudbiyay ayaa tilmaamaya in xukuumada ay qaado dhowr tallaabo oo ay ka hortagayso Kiiska badda la xiriira ee haatan yaal maxkamada Caalamiga ee Hegue.
Waxaa uu soo jeediyay in Lala hadlo dowladda federaalka Soomaaliya oo hab dimplamaasiyadeed lagu xaliyo muranka badda, iyadoo loo marayo midowga Afrika iyo Ururka goboleedka IGAD iyo in dowlada Kenya ay u gudbiso Qaramada midoobay inay ka soo horjeedo maxkamada Caalamiga ah ee ICJ.
Ugu dambayntii, wuxuu soo jeediyay in haddii ay fashilmaan hababkaasi ay dowladda Kiiniya ay ciidamadeeda milateriga gayso xuduuda badda ee ay la leedahay Soomaaliya si ay u ilaaliyaan sharafta iyo madaxbaaninada dhuleed ee wadanka Kenya.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hore u diiday in hab aan ahayn Maxkamada ICJ aan lagu xalin doonin kiiska Muranka Badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Maxkamada ICJ ayaa dib u bilaabaysaa kiiskaasi bisha soo socota ee september.
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale waxaa laga soo doortaa degmada Gaarisa eegobolka Waqooyi bari ee Kenaya ee Soomaalidu degan tahay. waxaa uu ka tirsan xisbiga Jubilee madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.